जब बज्छ प्रहरी भ्यानको साइरन– आधा सटर घ्यार्र...
मुख्य पृष्ठसमाजजब बज्छ प्रहरी भ्यानको साइरन– आधा सटर घ्यार्र…
जब बज्छ प्रहरी भ्यानको साइरन– आधा सटर घ्यार्र…
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै स्थानीय प्रशासनले गत बिहीबार अर्थात वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरे । सङ्क्रमित सङ्ख्या थपिएसँगै निषेधाज्ञा जारी हुने जिल्लासमेत थपिँदै गए । सोमबार दिउँसोसम्म ४१ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ ।
निषेधाज्ञा जारी भएसँगै खाद्यान्न र अत्यावश्यक सेवाका पसल बिहान र बेलुका मात्र सञ्चालन गर्न समय तोकिएको छ । जमघट हुने कार्य नगर्न प्रशासनले पटकपटक भनिरहेकै छन् ।
तर काठमाडौँका केही स्थानको अवस्था हेर्दा लाग्छ– यो निषेधाज्ञा जनताका लागि नभई प्रशासनका लागि लगाइएको हो । यहाँ न नागरिक निषेधाज्ञा मान्न तयार छन् न होटल, पसल व्यवसायीहरू ।
मानिस निस्फिक्री सडकमा निस्किएका छन्, पसल तथा होटल पनि खुलेकै छन् । जब प्रहरीको गाडीको साइरन बज्छ, त्यसपछि सडकका मानिस साइड लाग्छन्, अनि पसल–होटलका सटर घ्यार्र पारिन्छ ।
निषेधित समयमा बिनाकाम मानिस सडकमा निस्किएका छन् । उनीहरू सडकमा हिँडेको देख्दा लाग्छ– यहाँ कोरोना सङ्क्रमणको त्रास छैन । राजनीतिक कारणले लगाइएको कफ्र्युमा जसरी मानिस निषेधाज्ञा तोड्दा बहादुर सम्झिन्छन् ।
न शारीरिक (भौतिक) दुरी पालना छ । हातमा हात मिलाएर लामबद्ध रुपमा सडकमा निस्किएका देखिन्छन् । बच्चाहरू खाली सडकमा ब्याडमिन्टन, भलिबल खेलिरहेका छन् । जब प्रहरी भ्यानको साइरन आउँछ, तब केहीछिन बाटो खाली हुन्छ, प्रहरी गएपछि पुनः उही दृश्य ।
यस्तै आधा मात्र सटर खोलेर होटल चलाइरहेका छन् व्यवसायी । बाहिर बन्द गरेजस्तो गरेर भित्र विभिन्न परिकारहरू बनाइरहेको पाइन्छ । अनि ग्राहक पनि एक अर्कामा न सामाजिक दुरी, न मास्क– आनन्दले खान व्यस्त छन् ।
यता पसलहरू पनि मनोमानी चलाइरहेका छन् व्यापारीहरू । बाहिर आधा खुलेको सटरबाट ग्राहकले सामान लिँदै जाँदै गरिरहेका छन् । प्रहरी आएपछि हतारहतार सटर बन्द गर्छन्, प्रहरी गएपछि फेरि घ्यार्र…
भ्यानमा आएको प्रहरी टोली भन्छ, ‘अब त भ्यानको आवाजले पनि मान्छे तर्सिन छोडिसके । मनोमानी हिँडिरहन्छन्, हाम्रो ड्युटी सम्झाउने हो । बाँकी सम्झिने र बुझ्ने उनीहरूको काम हो । बुझ्नेले बुझ्छन्, नबुझेपछि परिणाम आफैँले बेहोर्छन् ।’
यता व्यापारीको तर्क बेग्लै छ । बिहान र बेलुका मात्रै पसल खोलेर उनीहरूको व्यापार नै हुँदैन रे । उनीहरू भन्छन्, ‘बिहान र बेलुका मात्र पसल खोलेर के गर्ने ? भाडा’नि उठ्न गाह्रो छ । खोलौँ पनि घाटा, बन्द गरे’नि घाटा । के हामी चाँहि बाँच्नु परेन ?’
‘हामीलाई सरकारले लौ तँलाई भनेर दिन्छ ? यसो ग’रो उसो ग’रो गरिबलाई दुःख दिने मेलो,’ उनीहरू भन्छन्, ‘अस्ति इन्डियामा सुरु भयो भन्नासाथै नाका बन्द गरेको भए अहिले यस्तो हुन्थ्यो ? समय छँदै केही गर्दैन, जब राति अनि बुढी ताती । खालि जनतालाई कष्ट दिने काम । खासमा भन्ने हो भने हाम्रो सरकारको केही काम ठिक छैन ।’
अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टरले पनि बाहिर हिँडडुल नगरी स्वास्थ्यको ख्याल राख्न अनुनय विनय गरिरहेकै छन् । कतिपय सङ्क्रमितले गाह्रो भएको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भित्र बस्न अनुरोध गरेका छन् ।
दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै अस्पतालमा बेड खाली छैन भनेर समाचार आइरहेकै छन् । तर नागरिकमा भने ती कुराको कुनै प्रभाव परेको छैन । यस्तो विकराल अवस्थामा पनि किन नागरिक खुलेआम हिँडिरहेका छन् ?
कोरोनाको यस कहरमा सबैका आ–आफ्नै पीडा छन् । मजदुर अनि साना व्यवसायीलाई भोको पेटको चिन्ता । दैनिकी गुजार्ने चिन्ता । यता सरकारलाई जनता कसरी जोगाउने चिन्ता । प्रहरी अनि डाक्टरलाई नागरिक सचेत नभइदिँदा चिन्ता ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले सबैको चिन्ता एउटै विषयमा हो– कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ।
सन् २०१९को अन्त्यमा चीनको वुहान सहरबाट फैलिएसँगै विश्वका हरेक देशमा अहिले कोरोनाको भय छ । लाखौँले ज्यान गुमाए । करोडौँ सङ्क्रमित भए । विश्वको अर्थतन्त्रमा ह्रास आयो । दिनहुँ हिँडडुल गर्ने अनि आफ्नो काममा व्यस्त रहने मानिस एउटा कोठामा सीमित रहनुपर्‍यो ।
संसारको चेतनशील प्राणी मानिस । तर पनि किन अबुझ भइरहेका छौँ हामी ? सबैका बाध्यता आफ्ना–आफ्नै भए पनि अहिलेको त्रास भनेको कोरोनाको हो । त्यसैले सबै जनाले निषेधाज्ञाको पालना गरेर सभ्य नागरिकको परिचय किन नदिने ?
यो अवस्थामा घरमै बसेर सरकारलाई किन सहयोग नगर्ने ? सरकारलाई सहयोग गर्नु भनेको नै हामी सुरक्षित रहनु हो । त्यसैले अहिले डाक्टर अनि सरकारको सुझाव अनुसार घरमै बसौँ । टोल छिमेक अनि सिङ्गो देशलाई कोरोनामुक्त बनाउन साथ दिऔँ ।
काेराेना निषेधाज्ञा लकडाउन